China Carton Flack leposi nokwenziwa kunye Factory | Huade
ICarton Flow Rack iqhele ukufakwa kugcino lwezixhobo zomatshini ngokwenza kunye noku-odola inkqubo yokuchola ngamaziko olungiselelo. Inamacandelo amabini: ulwakhiwo lwerack kunye neendlela zokuhamba ezinamandla. Iileyili zokuhamba zibekwe kumgangatho wobunjineli .ukuvumela isikhongozeli ukuba sibekwe kwisiphelo esingasentla kwithala kwaye sityibilike ukuya esiphelweni sokukothula .IiRoller zivumela isikhongozeli sihambe kakuhle ngumxhuzulane .sakuba isikhongozeli sisuswe esiphelweni sokulayisha, Isilayidi esiza kwisilayidi esilandelayo siza phambili ngokuzenzekelayo. Iqulethe iindawo ezintlanu: I-RHS Beam ene-engile (umphambili kunye nomqolo ongasemva onee-angles), i-RHS Beam (umqadi ophakathi ongenazo ii-angles), ipleyiti yokwahlula icala, ipleyiti esecaleni, iRoller (kwalenza) . I-engile yokuthambeka ngokubanzi yi-3-4 °, Ngokwendawo yokusetyenziswa, Inokwahlulahlulwa ibe luhlobo lomqadi kunye nohlobo lwesakhelo.
Le mqengqeleki idityaniswe ngokuthe ngqo kwimiqolo engaphambili nangemva kunye nomqadi ophakathi oxhasayo, kwaye umqadi uxhonywe ngokuthe tye. Ukuthambekela kokufakwa kweRack Rack kuxhomekeke kubukhulu, ubunzima bebhokisi kunye nobunzulu beRack Rack, ngesiqhelo i-5% -9%. Umthamo wokuthwala we-roller yi-6kg / isiqwenga. Xa iimpahla zinzima, iziqwenga ezi-3-4 zingafakwa kuloliwe omnye. Ngokubanzi, umqadi omnye oxhasayo ufakelwe yonke i-0.6m kwicala elinzulu lokunyusa ukuqina kweeroli. Xa umzila umde, umzila kaloliwe unokwahlulwa ngokwahlula ipleyiti. Ukuqhekeza kufuneka kufakwe kwisiphelo sokucothisa iimpahla kunye nokunciphisa ifuthe.
Ibhokisi yokuPhela kweRack isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso, kwezorhwebo, kwiziko lokuhambisa, kumasifundisane wendibano nakwigumbi lokugcina elinamaxesha aphezulu okuhambisa. Yisebenzisa iileyile zentsimbi kunye nealuminium ingxubevange yoololiwe, iyayiqonda iFIFO ngokusebenzisa ubunzima bayo beempahla, kwaye ilungele omabini amacala endibano kunye neziko lokuhambisa.
Igama lebrand Huade
Chwetheza Ibhokisi Flack leposi
Izinto eziphathekayo Q235 intsimbi
Isiqinisekiso I-CE, i-ISO9001: 2015
Umbala ngokwemfuneko nganye.
Unyango oluphezulu Ukwaleka Powder okanye kwalenza
Ubungakanani beHole yokuma nkqo Umngxunya wedayimani
Ikhowudi ye-HS 7308900000
Ukupakisha Zombini izinto eziphakanyisiweyo kunye nemiqadi epakishwe ngaphakathi ibotshelelwe ngokuqinileyo ngamabhanti ensimbi. kunye nefilimu ye-PE yagubungela yonke, iibhokisi zephepha zezincedisi.
Izibuko INanjing okanye iShanghai (iNanjing iyacetyiswa ngesizathu soqoqosho)
Egqithileyo I-Cantilever Rack
Okulandelayo: Qhuba kwiRack